Yintoni ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti? | Martech Zone
Intengiso esekwe kwiakhawunti (Isifinyezo: ABM) ngokukhawuleza iba okufuneka ubenazo kwiinkampani zeB2B. Ngokusekwe kuphando lwayo lwabathengisi be-B2B, i-ITSMA iqukumbela:
I-ABM ihambisa eyona mbuyekezo iphezulu kutyalo-mali lwaso nasiphi na isicwangciso-qhinga se-B2B okanye iqhinga. Ixesha.
SiriusIsigqibo I-2015 yoLawulo lwe-Akhawunti esekwe kwiAkhawunti (ABM) ifumanise ukuba i-92% yabathengisi beB2B bathi iABM yayikho Kakhulu or kakhulu ibalulekile kwimizamo yabo yokuthengisa.
Ngoku ka UMegan Heuer, Usekela Mongameli kunye noMlawuli weQela kwiSiriusIzigqibo:
Yintoni eyenza iABM ibe nomtsalane ngoku yindlela yokudibanisa ukuqonda kwesicwangciso kunye netekhnoloji yokuphumeza. Amaqela entengiso aqonda iABM bakwisikhundla esinamandla sokulungelelanisa ngcono noko kuthengiswayo, kunye nokwenza ukhetho oluhle malunga nezenzo ezifanelekileyo zokuthatha kunye nexesha elifanelekileyo lokuzithatha ukuze zikhule iiakhawunti ezinokubakho.
Intengiso esekwe kwiakhawunti inokuthi ithathe umhlaba we-B2B ngesiqhwithi, kodwa kubandakanya ntoni kwaye kutheni yonke le nto inovuyo? Makhe sijonge nzulu.
I-Wikipedia ibiza i-ABM indlela ecwangcisiweyo yokwenza ukuthengisa apho umbutho uthathela ingqalelo kwaye unxibelelane nethuba elinye okanye iiakhawunti zabathengi njengeemarike zazo. UJon Miller Engagio Utsho uABM uququzelela intengiso eyenzelwe wena kunye neenzame zokuthengisa ukuvula iingcango kunye nokwenza nzulu ukuzibandakanya kwiiakhawunti ezithile.
Ngelixa zininzi iindlela zokuchaza iABM, uninzi lweengcali ziyavumelana ngezinto ezimbalwa ezisisiseko. Imikhankaso yeABM:
Gxila kuzo zonke izigqibo eziphambili ngaphakathi kwenkampani (iakhawunti), ayisiyiyo eyokwenza izigqibo (okanye umntu),
Jonga iakhawunti nganye njenge "ntengiso yanye", kunye nemiyalezo kunye nezindululo zexabiso ezilungiselelwe iimfuno zenkampani nganye xa iyonke,
Sebenzisa umxholo wesiko kunye nemiyalezo ijolise ekusombululeni iingxaki ezithile zenkampani kunye namathuba
Ungaqwalaseli kungekuphela ukuthengiswa kwexesha elinye kodwa Ixabiso lokuphila komthengi ngamnye xa ubeka izinto eziphambili ngokubaluleka,
ixabiso umgangatho ngaphezu kobungakanani xa kuziwa ekukhokeleni.
Amaqhinga aqhelekileyo, ukuJolisa ngokuSebenzayo ngakumbi
Iindaba ezimnandi kuye nawuphina umthengisi ofuna ukuzama indlela yeABM kukuba izixhobo kunye namaqhinga aziqhelekanga kwaye zintsha; Zisekwe kwiindlela ezingqinisisiweyo abathengisi be-B2B abazisebenzisileyo iminyaka:
Ukukhangelwa okuphumayo nge-imeyile, umnxeba, imidiya yoluntu kunye neposi ngqo
Ukuthengiswa okungekho ngomxholo ophezulu we-funnel, ukubhloga, ii-webinars kunye nokuzibandakanya kwimidiya yoluntu
Iindlela zedijithali Njengeentengiso ezisekwe kwi-IP kunye nokujolisa kwakhona, intengiso yemidiya yoluntu, ubuwena bewebhu kunye nohlobo oluhlawulelweyo
iziganeko, imiboniso yorhwebo, iqabane kunye neziganeko zomntu wesithathu
Umahluko omkhulu yindlela ezijolise kuzo ezi zixhobo kunye namaqhinga. Njengoko uMiller esithi:
Akukho malunga neqhinga elinye; ngumxube wokuchukumisa oqhuba impumelelo.
Ukuhambisa ukuGxila ukusuka kuPsona ukuya kwiAkhawunti
Iindlela zokuthengisa zesiko le-B2B zisekwe ekuchongeni uhlobo olufanelekileyo lokwenza izigqibo (okanye umntu) kunye nokwenza imikhankaso yentengiso yokutsala umdla wabo. I-ABM iqhuba utshintsho ukusuka ekufumaneni ii-personas ngokubanzi ukuya ekuchongeni amaqela eempembelelo ezithile. Ngokophando lwe-IDG luka-2014, ukuthengwa kwamashishini okuqhelekileyo kuchatshazelwa ngabantu abali-17 (ukusuka ku-10 ngo-2011). Indlela yeABM iyaqonda ukuba xa kuthengiswa imveliso ethile okanye isisombululo kwinkampani ekumgangatho wenqanaba, unokufuna ukufumana umyalezo wakho phambi komkhosi wabantu abakumanqanaba ahlukeneyo egunya elinemisebenzi eyahlukeneyo.
Izixhobo eziLungileyo zenza ukuba iABM ibe lula
Kuba i-ABM yindlela eyenzelwe wena, ixhomekeke kwidatha elungileyo ekhokelayo. Ukuba awunayo i-up-to-date, i-database echanekileyo enokuthembela kuyo, ukufikelela kubo bonke abantu kwikhonkco lokwenza izigqibo ngaphakathi kwintlangano inokubethwa okanye iphoswe. Iya kuba njalo ke imizamo yokujolisa kwintengiso yesiko kunye nolunye ukufikelela kwi-Intanethi ngenkampani ye-IP.
Abathengisi abaphumeleleyo beABM bakufundile oko kuqikelelwa kubahlalutyi Amaqonga enzelwe isizukulwana esikhokelayo se-B2B sibonelela ngeenkcukacha ezichanekileyo nezipheleleyo zokwenza ukuba i-ABM yenzeke. Uqikelelo oluphambili kubahlalutyi Izisombululo zinokunceda ekuchongeni iinkampani ezifanelekileyo ekujolise kuzo ngokujonga ukuba zikulungele kangakanani na ukuthenga, ukugcina ixesha kunye nokwandisa amathuba okuphumelela
Uninzi luye lwadityaniswa namaqonga okuzenzekelayo anjengeMarketo kunye ne-Eloqua, kunye nezixhobo zeCRM ezinje ngeSalesforce. Umdibaniso wentengiso ezenzekelayo kunye neCRM ivumela iinkampani ukuba zicwangcise, zenze, zilinganise kwaye zilungiselele amaphulo eABM zisebenzisa ingqokelela yazo yentengiso.
Ekujoliswe kuko, kwiNtengiso, kuMlinganiselo
Ngoku uqonda izinto ezisisiseko, uqala njani? Inyathelo lokuqala lokuphumeza iphulo le-ABM kukuchonga iiakhawunti zakho ojolise kuzo. Mhlawumbi sele uyazi ukuba ngubani ofuna kakhulu ukumjolisa. Ukuba kunjalo, yiya kuyo. Ukuba awuyenzi, okanye ukuba ujonge ukuqala ishishini elitsha, umgca wemveliso entsha okanye uqhube izikhokelo ezitsha zeshishini esele likho, ufuna uluhlu lwethemba.
Kuba iABM ijolise kwiinkampani ekunokwenzeka ukuba zibe ngabona bathengi bakho, kuya kufuneka uyazi ukuba ijongeka njani inkampani yakho yethemba. Oku kuthetha ukuba nethemba elingenakuguqulwa kuphela, kodwa elivelisa ixesha elide.
Iiprofayili zakho ezifanelekileyo zabathengi kufuneka zibandakanye ukubonwa kwabantu, kunye nedatha ye-solidographic, kunye nokuziphatha, ukulunga kunye nenjongo. Bobuphi ubungakanani beshishini elifanelekileyo? Yimalini ingeniso yabo yonyaka? Ngawaphi amashishini asebenza kuwo? Bafumaneka phi? Ukongeza, iprofayile yomthengi efanelekileyo kufanele ukuba ijonge imikhondo yokuziphatha evela kumathemba, njengokufika kangaphi kwindawo yakho, kunye nokuqonda ukuba zeziphi ezinye iimveliso kunye neenkonzo abazisebenzisayo kwinkqubo yabo yokuthenga.
Hlela kwaye ubeke phambili
Nje ukuba uchonge amathemba obulunga, inyathelo elilandelayo kukucwangcisa kunye nokubeka phambili uluhlu, kwaye wenze isicwangciso sentengiso sokubandakanya olona khokelo luqinileyo. Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, awuzami ukujolisa kumntu othile, kodwa endaweni yabo bonke abathatha izigqibo kule nkampani. Oku kufuna indlela ebanzi yokuthengisa eyandisa ukufikelela komyalezo kwiijelo ezininzi. Le ndlela inokubandakanya ukubhengeza okunamandla, ukuthengisa okuphumayo, imidiya yoluntu kunye nokunye. Isitshixo kukuthengisa kunye namaqela okuthengisa asebenze ngokusondeleleneyo ukufezekisa iinjongo zabo ekwabelwana ngazo.
Inyani yokuba iABM izisa ukuthengisa kunye nentengiso kunye inkulu kakhulu. UMarketo uxela ukuba iipesenti ezingama-50 zexesha lokuthengisa lichithwe ekufumaneni izinto ezingenamveliso kwaye iitsales reps zingahoyi iipesenti ezingama-50 zokukhokela kwintengiso. Ukulungiswa gwenxa akubanga kuphela kwimveliso elahlekileyo, kodwa kuphulukene namathuba eshishini. Ngokwe-MarketingProfs, imibutho ehambelaniswe ngokuqinileyo #sales kunye #marketing imisebenzi inamava angama-36 eepesenti aphezulu okugcina abathengi kunye neepesenti ezingama-38 zokuthengisa okuphezulu.
Gxila kwiXabiso loBomi bonke
Nge-ABM, ukuvala isivumelwano ayisosiphelo sobudlelwane, kodwa sisiqalo sayo. Nje ukuba ithemba libe ngumthengi, kubalulekile ukuba bahlale benelisekile. Oku kufuna idatha. Imibutho ye-B2B kufuneka yazi ukuba kwenzeka ntoni emva kokuba umthengi ethengile, ukuba usebenzisa ntoni kwaye angasebenzisi ntoni, kwaye yintoni eyenza ukuba umthengi aphumelele. Umthengi akabalulekanga ukuba awukwazi ukugcina ishishini lakhe. Bazibandakanya kangakanani nemveliso? Ngaba basemngciphekweni wokushiya? Ngaba bangumgqatswa olungileyo wokuthengisa okanye ukuthengisa umnqamlezo?
Ngee-ABM ezikhokelayo, nguMgangatho ongaphezulu kobungakanani
Inani kukhokelela kwaye amathuba akonelanga ukulinganisa i-ABM. Isicwangciso asisebenzi kwinkcazo yemveli yesikhokelo, kunye namaxabiso asemgangathweni ngaphezulu kobungakanani. Kwixesha elidlulileyo, iABM ibisetyenziswa ikakhulu ziinkampani ezinkulu, ezinezixhobo ezifanelekileyo ezinokutyala ixesha elininzi kunye nemali kwinkqubo ephezulu. Namhlanje, itekhnoloji inceda ukuzenzekelayo kunye nokulinganisa i-ABM, ethi izise iindleko ezantsi kwaye yenza ukuba i-ABM ifikeleleke ngakumbi kumashishini abo bonke ubungakanani. Uphando lubonisa ngokucacileyo ukuba ukuthengisa kwe-B2B kuya kwi-ABM. Ngumba nje wokuba ukhawuleze kangakanani.
tags: abmIntengiso esekwe kwiakhawuntiUkuthengisa iakhawuntiintengisokublogaileta ngqoeloquaemail Marketingengenayoip-based adsukukhokela genekhokelelauphawuukuphuma ngaphandleimiboniso yorhwebo ekhokelwayo ehlawulelweyoimicimbi yamaqabaneNgokwezifisoukukhangela kwefowuniukubuyisela kwakhonaukuthengisaImidiya yokuncokolaIziganeko zomntu wesithathuumphezulu wefaneliulwenziwo lwewebhuwebinaryintoni abmYintoni intengiso esekwe kwiakhawunti
Uyisebenzisa njani iStumbleUpon kunye neStumbleUpon Ads